Ukwengeza Ivelu Eyengeziwe Ekuphrinteni - I-Intec Printing Solutions Ltd
Iba nguzakwethu we-Intec
Ukusika & creasing
Amaphrinta ombala wedijithali
Indawo yokubukisa ebonakalayo
Sesha umkhiqizo ngemodeli
Izilimi zamazwe ngamazwe ze-ColorSplash user manual
Ukuhamba komsebenzi nokuphathwa kombala
Isixazululo selebula ye-LPS215
Bhalisa umkhiqizo omusha
Ukusekelwa kwevidiyo 'kanjani'
I-MSDS – impilo nokuphepha
Imidiya enconyiwe neqinisekisiwe
Ihhovisi elikhulu lase-UK
Izinhlelo zokusika zedijithali
Uhlu olubanzi lwamamodeli afanele izinhlelo zokusebenza kanye nokukhiqiza
Foiling & laminating izinhlelo
Engeza imiphumela ye-premium nge-toner foil, ama-laminates namafilimu e-holographic
Amasistimu wokuphrinta umbala wedijithali
Amaphrinta we-modular, anencazelo ephezulu yezithombe zobuciko
Ama-Digital die cutters | Ama-Foilers nama-laminator
I-Intec ibilokhu isenhliziyweni yokuqanjwa kabusha kwaseBrithani nokuklama imboni yokunyathelisa nokuqeda umhlaba wonke kusukela ngo-1989 futhi isikhule yaba umphakeli omkhulu wezixazululo eziyingqayizivele zamaphrinta edijithali, ama-foiler kanye namadivayisi okusika.
Inketho yezixazululo zedijithali zokusika nokufa okuqabulayo zohlelo olubanzi lwezinhlelo zokusebenza kusukela emaphaketheni kuye kumalebula. Ama-Flatbed kanye nezinhlelo zokusika okuphakelayo okuzenzakalelayo, imishini yokusika amakhadi ebhizinisi kanye nezinhlelo zokusika amalebula azinikele eshidi elisikiwe.
I-foiler / laminators
Ideskithophu kanye namadivayisi azimele amabili asebenza ngokufohloza kanye ne-lamination, aklanyelwe ukunikeza isisombululo sasendlini esithengekayo nesidingeka kakhulu sokwengeza amafoyili ensimbi, amalayithi kanye nemiphumela ye-holographic.
Engeza kalula ama-premium finishes kanye nemiphumela emangalisayo kumashidi aphrintiwe.
Amaphrinta edijithali ahamba phambili ekilasini futhi athengekayo, asekela ukukhetha okubanzi kwezinhlobo zemidiya. Ububanzi buhlanganisa, ukukhethwa kwamamodeli wemibala emi-4 yokugijima okufushane & okumaphakathi kokuphrinta amakhadi, ukupakisha, amabhanela, amalebula, izimvilophu, imidiya yokudlulisa nokunye okuningi.
I-ColorCut FB775 Digital die cutter
Ukusika okuhamba phambili ekilasini namandla okudala
Kuyashesha, Kunamandla, Kuyathandeka!
BONA ENTSHA FB775
Buka ububanzi bamanje bomkhiqizo we-Intec.
Buka futhi ulande izincwajana zomkhiqizo.
Buka amavidiyo omkhiqizo.
Ungagcini nje ngokuthatha izwi lethu ngakho - nakhu okushiwo amakhasimende ethu - chofoza ukuze uthole izehlakalo.
I-Intec ColorFlare yethu isilondolozela imali futhi iletha ibhizinisi elisha elijabulisayo enkampanini yethu yokunyathelisa yezentengiselwano osekunesikhathi eside yasungulwa.
UTony Bowyer Phrinta
Umsiki wethu we-ColorCut flatbed usize kakhulu ekuguquleni ibhizinisi lethu ngokwandisa umkhiqizo nokudala amathuba amasha.
Amakhadi Okudlala Amagugu
Singakhiqiza i-prototype eyodwa noma iqoqo lonke lamasampuli, ngokushesha futhi lapho kudingeka khona - ngokuqiniseka ngekhwalithi yomsebenzi.
Ingabe udinga ukusekelwa okukude kwa-Intec?
Thola usizo olusheshayo ngokuqondile kuchwepheshe be-Intec - sizokwabelana ngesikrini sakho nge-TeamViewer futhi sixazulule noma yiziphi izinkinga ongase uhlangane nazo ngesisetshenziswa sakho se-Intec. Shayela u-Intec kuqala ukuze ibhola ligingqike.
Thola usizo nge-TeamViewer
Ihhovisi elikhulu lase-Intec UK:
Ucingo: + 44 (0) 1202 845960
Isikhungo Sebhizinisi saseNyakatho Tampa 16011 N. Nebraska Avenue
Ucingo: + 1-813-949-7799
I-Intec iyinkampani yomhlaba wonke ngempela, enamahhovisi e-UK nase-USA, esekela inethiwekhi yabadayisi emhlabeni wonke. Isungulwe eminyakeni engu-30 edlule, i-Intec ihlonishwa kakhulu ngenxa yemikhiqizo yayo ethembekile, yobungcweti, eyisipesheli ehloselwe ngokukhethekile imboni yokuphrinta nezithombe. Funda kabanzi lapha. Funda ukuthi i-Intec 'yenza umehluko' ngayo umsebenzi wokupha.
Imininingwane yokubhaliswa kwenkampani
Yiba Uzakwethu we-Intec
Xhumana ne-Intec UK
Xhumana ne-Intec USA
Bhalisa ekhasini le-Newsletter ukuba ngowokuqala ukuthola izindaba.
Inkampani engu-Intec Printing Solutions Ltd
Kungani ungabhaliseli i-newsletter ye-Intec ngaphambi kokusithumelela i-imeyili - futhi uthole ukufinyelela ku...